प्रसाद आजबाट दर्शकमाझ, लेखक भन्छन्–परिवर्तनको उपज हो ‘प्रसाद’ | Sagarmatha TVSagarmatha TV प्रसाद आजबाट दर्शकमाझ, लेखक भन्छन्–परिवर्तनको उपज हो ‘प्रसाद’ | Sagarmatha TV
प्रसाद आजबाट दर्शकमाझ, लेखक भन्छन्–परिवर्तनको उपज हो ‘प्रसाद’
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित बनेको चलचित्र प्रसाद शुक्रबारबाट दर्शकमाझ आएको छ । चलचित्रको गीत र ट्रेलरका कारण मात्र नभएर चलचित्रको कथा पनि दर्शकका लागि विशेष हुने चलचित्रका लेखक सुशील पौडेलले बताए ।
उनले प्रसाद सामाजिक विषयमा निर्माण भएको जानकारी दिए । यसको मुख्य विषय निःसन्तान दम्पतिको पीडा हो भने सहायक विषयका रुपमा अन्र्तजातीय विवाहलाई देखाउन खोजिएको छ । निसन्तान दम्पति अनि अन्र्तजातीय विवाह दुवै समाजमा घटिरहने विषयहरु भए पनि त्यसमा आम चासो खासै रहेको देखिँदैन । तर, झण्डै डेढ दशक पत्रकारितामा विताएका शुशिलाई गढेको यही विषयले अन्ततः चलचित्रको मुर्त रुप पाएको हो ।
त्यसो त उनी चलचित्र पनि पत्रकारिता जस्तै सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको विषय हो भन्न रुचाउँछन्– सुशील । उनले भने ‘चलचित्रको कथा समाजमा घटिरहने घट्ना हो । मैले वास्ता गरेको मात्र हो । यस्ता घट्नाका लागि समाजले बनाउने पूर्व निर्धारित सोचमा म असहमत थिए, त्यसकै उपज हो चलचित्र ।’ शुशीलको यो भनाइबाट एउटा कुरा के अनुमान लगाउन सकिन्छ भने समाजमा जे भइरहेको छ र समाजलाई अबका दिनमा यस्तो गर्न सक्नुपर्छ भनेर एउटा सन्देश पनि प्रसादले दिन खोजेको पक्कै बझिन्छ ।
उनले भने – ‘समाजमा जे चलिरहेको छ, चलिरहेको छ । समाजले भनेका सबै सत्य हुन्छन् भन्ने होइन । समय र सोच अनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ । परिमार्जन, परिवर्तनको उपज, त्यही सोच अनुरुप प्रसाद जन्मिएको हो । समाजमा जे घटिरहेको छ त्यो भन्दा बेग्लै धारबाट प्रसादले सोचेर हेरेको छ । कन्भिन्स हुने नहुने दर्शकको कुरा हो ।’ त्यतिमात्र नभएर सुशील भन्छन् – ‘समय परिवर्तन भएको छ । तर, सोच परिवर्तन भएको छ कि छैन । त्यही सोचले चलचित्रको कथालाई अघि बढाउँछ ।’ प्रसादको मुख्य भुमिका महिलाको नै भएको र र महिलाले पनि आफ्ना लागि आवाज उठाउन सक्छ, समाजमा बिद्रोह गर्न सक्छ भन्ने कुरा चलचित्रमार्फत देखाउन खोजिएको छ ।
सुभाष थापाको निर्माण रहेको चलचित्र प्रसादमा नम्रता श्रेष्ठ, विपिन कार्की, निश्चल बस्नेत, बसुन्धरा भुषाललगायतका कलाकारको पनि अभिनय रहेको छ । चलचित्रलाई दिनेश राउतले निर्देशन गरेका हुन । त्यसो त ‘लै लै’ बोलको गीतबाट निकै चर्चा कमाएको चलचित्र ‘प्रसाद’ ‘बनकी चरी’ बोलको गीतले झन चर्चित बन्यो ।
अभिनयमा खारिएका कलाकारहरुको अभिनय रहेको कारण दर्शकहरु चलचित्र राम्रो बनेको छ भन्नेमा ढुक्क रहेका छन् । सन्तान नहुँदा एक दम्पतीले समाजमा भोग्नु परेको यातना नै चलचित्र ‘प्रसाद’ को कथा हो । विवाह भएर पनि सन्तान नहुँदा एक दम्पतीले समाजमा कस्ता कस्ता यातना भोग्नु पर्छ ? सहनुपर्छ ? समाजको कस्तो कस्तो कुरा सुन्नुपर्छ ? यही कारणले श्रीमान–श्रीमतीबीच कसरी असमझदरी पैदा हुन्छ भन्ने कुरा चलचित्रको माध्यमबाट देखाउन खोजिएको छ ।
निर्माण पक्षले बुधबार राजधानीमा चलचित्रको प्रिमियर आयोजना गरेको थियो । जहाँ उपस्थित सवैले चलचित्रको मुक्तकण्ठले प्रसंशा गरे । उनीहरुले कलाकारको अभिनय र कथावस्तुलाई फिल्मको सशक्त पाटो भएको बताए । दिनेश राउतको निर्देशन, सुशील पौडेलको कथा, सुवाष थापाको निर्माण रहेको फिल्ममा नम्रता श्रेष्ठ, विपिन कार्की र निश्चल बस्नेतको लिड रोल छ । प्रिमियरमा उपस्थित भुवन केसी, रेनाशा वान्तवा राई, हेमराज विसी, केशव भट्टराई, दीपेन्द्र के. खनाल, दीपकराज गिरी, जितु नेपाल, केदार घिमिरेलगायतले फिल्मले उठाएको विषयवस्तुको तारिफ गरे ।